Nzira dzekudzikisa Mutengo Wekufamba Kwemakore - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Cloud computing, Cloud Kutama
Covidien-19 zvinoreva vashandi vari kure kune mazhinji emakambani. Chikamu chechikonzero nei vari kutamisa zviwanikwa zvese uye tekinoroji stacks kune gore.
Mikana yakakwira iwe uri kutsvaga kutevedzera zvinodiwa nedenda.
asi gore kutama hakusi kwese kupenya kwezuva nemaruva.
Chokwadi vanogadzirisa yekuzorora uye kuyera maitiro, asi mutengo unoramba uchiramba uri mukuru munzira blocker pamwe neshanduko.
Anopfuura makumi mashanu muzana emakambani akaita shanduko munguva pfupi yapfuura gore kunyunyuta pamusoro pekugadzirisa mari. 
Mari yebasa kukwenenzvera gore hunyanzvi hunogona kuita kusvika 50% yemitengo yekutama. 
Matambudziko akakosha nekufamba kwegore
Iwo maapplication akavakirwa-panzvimbo maseva anoita zvisingaite pa gore.
Pane kudikanwa kwekugadzirisazve maapplication anoenderana ne gore Nzvimbo.
Zvakaoma kuona mari yekutama iyo inogona kuwedzera kuuya nemari yakavanzwa kana isina kunangana.
Kurovedzwa kwevashandi kubva pakutanga kunogona kutora nguva uye zviwanikwa.
ose gore dambudziko rekutama rinowedzera kumutengo.
Izvozvo zvakati, hazvibviri kuchinja yako bhizimisi ku gore uye kusanakidzwa nekugadzirwa kwayo mukati mebhajeti yako.
Saizvozvo, gore tekinoroji inowanikwa zvakanyanya uye isingadhure pamutengo weyuniti post-migration.
Dambudziko chete rekugadzirisa mutengo rinoitika iwe paunenge uchiita shanduko.
Usati wawana nzira dzekudzikisa gore mitengo yekufambisa, ngationei nzvimbo, iwe unozobhadhariswa mari gore migration.
Ndeupi mutengo wekutama kwegore?
Chekutanga, ziva mutengo wekusatamira kune gore.
Ne-on-premises data, unobhadharirwa ye-in-house infrastructure yakadai se hardware uye Software updates, chibatiso, uye kugadzirisa.
Kune rimwe divi, iwe unofanirwa kuisa imwe mari pamwedzi / pagore yekushandisa iyo gore zvivakwa pasina kunetseka nezve chero up-gradation charges.
Mubatsiri webasa anoshanda pamhando yekunyorera kwaunobhadhara fizi yekushandisa masevhisi avo.
gore zvinogona zvakare kuda kuti iwe upedze pamapurojekiti ekutanga ekumisikidza, kubatanidza maapplication, kudzidziswa kwevashandi, uye kuyedzwa.
Zvekare, kune mhando mbiri dze gore kutama
Chero iwe unoteedzera yakapusa yekusimudza-uye-kusuduruka kutama (pasina kuitazve mainjiniya ako maapplication)
Kana kuti gadzirazve zvese kuti zvienderane gore zvinoda.
Post-kutama, iyo yekupedzisira mari inouya inofanira kunge iri mari yekunyorera.
Iwe haugone kupokana neizvi, asi chete nzvimbo dzinokutengera iwe panguva yekutama.
Nzvimbo dzinodhura ndidzo nzvimbo dzaunochengetedza.
Matipi kune anodhura-anoshanda gore kutama
Ngationei kuti inodhura-inoshanda gore nzira dzekutama zvakanyanya gore vamiriri venyanzvi vanotama.
Sarudza iyo yakakodzera-saizi zvivakwa kune yako gore zvinodiwa
Tanga kutonga gore mutengo kubva pashoko kuenda.
Iwe unogona kuita izvi nekusarudza zvishoma zvinodiwa, izvo zvinoenderana neyakachipa gore Services.
Ndokumbira utarise zviwanikwa zvaunazvo mune iripo-panzvimbo stack zvingasave zvichidikanwa mu gore.
Pfungwa iyi ndeye kuve neyakakwana kuita zvinodiwa muruoko rwako pane kukopa-kuisa zviwanikwa zve-prem server kune gore.
Nemashoko akareruka, iva neiyo diki zvivakwa zvinogara zvese zvaunoda kuti umhanye a bhizimisi.
Iwe hausi kuda kuve uchibhadharira iyo isingashandisike yakawandisa nzvimbo; pachinzvimbo, zvakasununguka kuyera nzvimbo yako mu gore pazvinenge zvave kufanira gare gare.
Bhajeti yako yekutsvagisa mari
Kunyangwe iri AWS kana Azure, yakakurumbira gore masevhisi anouya ane mukurumbira wakashata mu-rutsigiro.
Saka chero iwe unoshandira kutama nekuchengetedza chirongwa chako kana kusarudza masevhisi akachengetedzwa kuti uzviitire iwe.
Muzviitiko zvakawanda, kuburitsa rako remberi gore ku gore vanopa mazano zvakachipa pane kuhaya an-roll gore dhizaina muchikwata chako.
Pfungwa dzako! Cloud vanachipangamazano vanogona kudzikisa mari yekufambisa nekuita 50%.
Nekudaro iwe unofanirwa kuve nevanhu vanokwanisa kutema-nguva yekugadzirisa maitiro uye kuvabatsira kuti vapinde mugore nekukurumidza sezvazvinogona.
Kwete izvozvo chete. Nyanzvi yegore inoziva nzungu uye mabhaudhi eruzivo rwegore inokwanisa kuisa maoko ako pazvibvumirano zvechokwadi kana zvese zvofamba.
Chengetedza sevha kwenguva yakareba
Kazhinji, mabhizinesi anoenda kune "on-demand" mamodheru.
Iko mukana neanoda-mhando mamabhizinesi anobhadharira zvivakwa zvavanoshandisa mune chero chairo awa.
Saka ivo vanoshandisa nemazvo sevha chaiyo padanho ravanoda rehardware uye Software, saizi yegore rekurangarira kuchengetedza data, uye mamwe akawanda ma paramita. Ivo zvakare vanokwirisa kana kudzikisira mirwi yavo chero nguva yavanonzwa kudiwa.
Asi neinoramba ichingokwira uye kudonha kana kusava nechokwadi kwekushandisa zviwanikwa, vanorohwa pamwe nemari yekuwedzera.
Unogona kuzvidzivirira nekuchengetera kana kuzvipira kune imwe chiitiko kwenguva yakareba, kumwe kunopoteredza gore.
Izvo zvirongwa zvakaita sekuchengetedza 'kutenga! Iwe unochengetera gore uye unoibhadharira kuti uwane goho riri nani kwazvo pamitengo yeyuniti. Kuchengetedza nzvimbo pane yegore semuenzaniso kunogona kudzivirira chikwama-kutetepa kunyangwe usati watanga. Yakakura kutanga-musoro.
Chengetedza Jevons Paradox mupfungwa
Paunenge uchinge waita kune iyo gore, iwe unogona kupinda iyo yekubhadhara-se-iwe-enda modhi.
Zvinoreva kuti iwe uri kutarisira uye kubhadhara kune chimwe chikamu chemotokari uye nebasa rekuwandisa.
Asi mitswe inoonekwa mugore kana iwe ukangoerekana wadarika miganho uchifunga idzo isingadhuri uye inowanika.
Ehezve, iyo yeyuniti mitengo ichagara yakaderera kwauri. Makore aifanirwa kutarisira nhamo dzemari. Asi iwe unogona kupedzisira warasikirwa nezvimwe kubva kumarejista emari kana ukasatsvaga kushandisa kwako.
Inonzi Jevons Paradox.
Izvi zvinoitika nekuti panogona kuve nekubuda uye kubuda kwemashoko ari mugore kupfuura ruzivo rwako.
Yako invoice yemwedzi wega inogona kuyambuka zviri nyore chikumbaridzo bhajeti.
Saka iwe unofanirwa kutarisira yako yemwedzi yegore bhajeti uye chengeta ziso kune zvakadzama nekufamba kwenguva.
Iyo yekupedzisira nharo
Tarira! Isu tinoziva mutengo-unoshanda kutama kwakakosha. Asi handicho chete chinhu chinofanira kukutadzisa kufamba kumatenga.
Funga zvinhu zvakaita sekuita, chibatiso, backup, zvivakwa patani, uye kuvimbika. Ungangoda kutamisa maapplication ako kune makore masevhisi asingatengese chero chinhu nemutengo wakachipa.
Chekupedzisira, iwe unogona kuendesa mutengo wekudzivirira maturusi ekugadzirisa zvese zvatakakurukura pamusoro; kunyangwe ivo vasingakwanise kutsiva kupindira kwevanhu, vanogona zvechokwadi kushanda tandem yekuchengetedza-mutengo.